Beesha Caalamka oo shir uu dibad joog ka yahay Farmaajo u qabaneysa Dowlad Gobaleedyada - Awdinle Online
Beesha Caalamka oo shir uu dibad joog ka yahay Farmaajo u qabaneysa Dowlad Gobaleedyada
Maalmihii la soo dhaafay waxaa Magaalada muqdisho kulamo ku yeelanayay qaar kamid ah Madaxda dowlad Goboleedyada, kulamadaas oo looga hadlayay khilafka doorashada iyo sida looga gudbi karo.
Kulamadii u dambeeyay ee dhex-maray Madaxweynayaasha Galmudug, Jubbaland iyo Puntland ayaa furre u noqday shir ay maanta isugu imaan doonaan Shanta Madaxweyne Dowlad Goboleed iyo Wakiilada Beesha Caalamka ee C6+.
Shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa sidii looga heshiin lahaa ajandaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo socda uu dhex maro dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada..
Dhowr jeer ayaa Madaxda dowlad Goboleedyada waxaa ay shir la yeesheen Wakiilada Beesha caalamka, iyaga oo ka wada hadlayay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada Soomaaliya.
Beesha Caalamka ayaa xilligaan waxaa ay wadaa dadaaladii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii la isugu keeni lahaa saamileyda siyaasadeed ee dalka, si ay uga heshiiyaan doorashada Soomaaliya oo weli khilaaf ka taagan yahay.
Previous articleJubbaland oo gacanta ku dhigtay sarkaalkii ugu sareeyay Al-Shabaab ee Gobolada…
Next articleCiidamada AMISOM oo isaga baxay Xero Ciidan iyo Ciidamo kale oo la wareegay